Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Djibouti oo ku baaqey in la joojiyo colaadda gobolka Hiiraan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Djibouti oo ku baaqey in la joojiyo colaadda gobolka...
22 Febraayo 2015, Muqdisho: Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Djibouti Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si wadajir ah baaq nabadeed iyo in colaadda la joojiyo u jeediyey maamulka , odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
“ Waa nasiibdarro in weli aad xal kama dambeys ah u heli weyseen colaaddan soo noqnoqotey. Waa markii afraad ee
aan halkan idinkugu imaado anigoo wada fariin nabadeed. Haddana waxan mar kale idin leeyahay nabadda degdeg ha loo qaato. Ciidammada AMISOM ee halkan idin la jooga waxay idin ka saacidi karaan oo keliya inaad isku timaaddaan oo aad wadahadashaan, balse go’aanka kama dambeysta ah idinka ayaa iska leh oo baajin kara dhiig mar kale si micno darro ah ku daata”.
Wafdiga labada madaxweyne ayaa safarkaasi kadib ku soo laabtey magaalada Muqdisho
Previous articleMadaxweynaha Djibouti oo ka dhoofay Muqdisho Booqasho laba maalin ah kadib
Next articleUrur-weynaha Shaqaalaha Soomaaliya oo Ka Qeybgalaya Shir Caalami ah